Haweeney awoodi kari weyday inay si buuxda u xidho indhaheeda ka dib markii ay gashay qalliin qurxin ah | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Haweeney awoodi kari weyday inay si buuxda u xidho indhaheeda ka dib markii ay gashay qalliin qurxin ah
Haweeney awoodi kari weyday inay si buuxda u xidho indhaheeda ka dib markii ay gashay qalliin qurxin ah
Posted by: Ahmed Haaddi December 22, 2021
Himilo – Haweeney u dhalatay dalka Shiinaha oo lacag dhan 13,000 Yuan u dhiganta ($1,850) ku kharash gareysay qaliinka labada indhood ee isqurxinta ah, balse waxa ay awoodi waysay inay si buuxda indhaha isugu qabato, xataa marka ay seexato.
Ku dhawaad ​​50 Aasiyaan ah ayaa ku dhasha iyaga oo aan lahayn indho dabool oo muuqda oo ka sarreeya baarsha , taas oo asal ahaan ka dhigan in ay leeyihiin waxa loo yaqaan “monolid”. Sannadkii 1896-kii, si wax looga qabto arrintan, dhakhtarka qalliinka ee Japan Mikamo waxa uu sameeyay hab lagu magacaabo blepharoplasty kaas oo tan iyo markaas la sameeyay malaayiin jeer. Waa qalliinka caagga ah ee ugu badan ee laga codsado Aasiya, iyo waddamada sida Kuuriyada Koonfureed, oo loo qaabeeyey si ay u noqoto mid soo jiidasho leh. Laakiin halka natiijooyinka qalliinka labada indhood ay runtii noqon karaan kuwo muuqaal ahaan soo jiidasho leh, xaaladaha qaarkood waxay yeelan karaan cawaaqib aad u xun, sida inay bukaanku awood u yeelan waayaan inay si buuxda u xidhaan indhahooda.
Oriental Daily ayaa dhawaan soo wariyay kiiska haweeney Shiinees ah oo lagu magacaabo Li oo bixisay 13,000 si ay u hesho qalliin labanlaab ah oo daboolka indhaha ah iyo qalliinka sixitaanka ee epicanthus, laakiin waxay ku dhammaatay inay ka qoomameyso go’aankeeda. Waxaa lagu soo waramayaa in ay codsatay nidaamka si ay indhaheeda ugu ekaadaan kuwa waa weyn, laakiin aad uguma faraxsanayn natiijada, sidaas darteed waxay ka codsatay rugta caafimaadka inay sameyso faragelin kale oo ay ka dhigto saameynta labada indhood mid caan ah.
Dhakhaatiirta ayaa isku raacay in mar kale qaliin lagu sameeyo, laakiin natiijada qaliinka labaad ayaa ku guuldareystay inay ka farxiso haweeneyda. Dhab ahaantii, indhaheeda ayaa ka sii daray, waxayna ogaatay in aysan si buuxda u xiri karin indhaheeda.
Rugta caafimaadka ayaa isku dayday in ay sharaxdo in qaliinkii labaad uu aad ugu dhawaa kii hore, sidaas darteed nabarradii ka soo baxay labadooduba ay isku dhegeen, taas oo keentay in bukaanku uu awoodi waayo in uu si buuxda indhaha isugu qabto.
Wakiilada rugta caafimaadka ayaa la sheegay in ay haweeneyda u sheegeen in dhibka soo gaaray uu caadi yahay marka ay xaaladdu jirto, laakiin ay awood u yeelan doonto in ay mar kale indhaheeda isku qabato marka ay si buuxda u bogsadaan nabarrada.
Waxa ay sidoo kale soo bandhigeen in la sameeyo nidaam seddexaad oo lagu saxayo dhibaatadan, balse haweeneyda ayaa la sheegay inay diiday, taas bedelkeedana ay codsatay magdhow.
Iyadoo ku andacoonaysa inay ku seexatay iyada oo indhaheeda kala badh furan yihiin, iyo in ay awoodi wayday inay si buuxda u xidho indhaheeda waxay ka dhigtay araggeeda qallafsanaan, Li waxay awooday inay la gaadho heshiis 30,000 yuan ($4,200) ah rugta caafimaadka. Waxay hadda rajaynaysaa in indhaheedu ay bogsan doonaan wakhtiga, sida ay dhakhaatiirtu sheegeen.
Qore: Hanaa Maxamed Maxamuud
Previous: Ba’a qaadka balaayo naheysata
Next: Real Madrid oo waayi doonta 11 ciyaaryahan kulanka maanta